သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးမှုပိုများလာပြီး စွဲဆိုတဲ့ ပုဒ်မတွေပြင်းထန်လာတယ်လို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြော - ข่าวสด
သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးမှုပိုများလာပြီး စွဲဆိုတဲ့...
သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးမှုပိုများလာပြီး စွဲဆိုတဲ့ ပုဒ်မတွေပြင်းထန်လာတယ်လို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြော
16 ก.ย. 2564 - 20:00 น.
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတွေ၊ အရင်က သတင်းထောက်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လထဲကစလို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ဖမ်းဆီးမှုတွေစိပ်လာပြီး စွဲဆိုတဲ့ ပုဒ်မတွေလည်း ပြင်းထန်လာတယ်လို့ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်သူတွေ နဲ့အတူ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုမှုတွေ စတင်ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လထဲမှာတော့ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အတူ မီဒီယာသမားတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လထဲမှာတော့ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို စစ်ကောင်စီဘက်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ထပ်တိုး ပုဒ်မခွဲတွေ ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ ဥပဒေအရ CRPH , NUG ,PDF စတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေ၊ကူညီထောက်ပံ့ပေးသူတွေ၊ နေအိမ် ဌားရမ်းခိုလှုံခွင့်ပေးသူတွေအပြင် သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေ၊ သတင်းရေးသားသူတွေကိုပါ တရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သတင်းစာဆရာ ဦးစည်သူအောင်မြင့်ကို အမှုထပ်တိုး တရားစွဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှာ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ သတင်းစာဆရာဦးစည်သူအောင်မြင့်နဲ့အတူတူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ဘီဘီစီ မီဒီယာအက်ရှင်ရဲ့ အလွတ်တန်းထုတ်လုပ်သူ မထက်ထက်ခိုင်တို့ကိုလည်းစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေအပြင် မြို့နယ်ရဲစခန်းအလိုက် ထပ်တိုးပုဒ်မတွေပါ စွဲဆိုထားတာရှိတယ်လို့ အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက ဆိုပါတယ်။
သတင်းစာဆရာ ဦးစည်သူအောင်မြင့်ကိုတော့ ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅- ကနဲ့ တရားစွဲဆိုတဲ့အပြင် ပုစွန်တောင်ရဲစခန်းမှာပါ ပုဒ်မ ၅၀၅ -ကနဲ့ထပ်တိုးတရားစွဲဆိုခဲ့သလို အကြည်ညိုပျက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၂၄နဲ့ ထပ်တိုးတရားစွဲဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။
အလားတူပဲ ဘီဘီစီမီဒီယာအက်ရှင်ရဲ့ အလွတ်တန်းထုတ်လုပ်သူ မထက်ထက်ခိုင်ကိုလည်း ဖက်ဒရယ် FM မှာပါဝင်ကူညီလုပ်ကိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ ၁၇( ၁) အပြင် နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅-ကနဲ့ တရားစွဲဆိုဖို့ လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ အဆိုပါရှေ့နေဆီက ထပ်သိရပါတယ်။
ဦးစည်သူအောင်မြင့်နဲ့ မထက်ထက်ခိုင်တို့ ဖမ်းဆီးခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး အလွတ်တန်း သတင်းထောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မသူဇာကို စစ်ကောင်စီကထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
သတင်းထောက်မသူဇာကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ၁ ရက်နေ့မှာ ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းက ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာအနီးမှာ အရပ်ဝတ်နဲ့လူတစ်ခုက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိ ဘယ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရတဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။
" ၁ရက်နေ့ကနေအခုထိဆို ၁၆ရက်ရှိသွားပါပြီ။ဘယ်နယ်မြေရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာမသိရသလို၊စစ်ကြောရေးရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားပေမယ့် လည်းစုံစမ်းဖို့ခက်နေပါတယ်။
သူ့အမေလည်း အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ အိပ်ယာထဲလဲနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ရမယ်မသိဘူး ရင်တွေပူနေတယ်။ တစ်ခုခုသေသေချာချာသိရရင် ထောင်ကျနေပြီဆိုလည်း လိုက်လုပ်ပေးလို့ရသေးတယ်။ အခုဘာမှမသိရတော့ ရင်တွေပူနေတယ် " လို့မသူဇာရဲ့ အမျိုးသားက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
သတင်းထောက်မသူဇာဟာဆိုရင် အရပ်သားအစိုးရ လက်ထက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ရဲ့ကောင်စီဝင်ဟောင်းဖြစ်သလို ဆဲဗင်းဒေး၊ ဧရာဝတီစတဲ့မီဒီယာတွေမှာသတင်းထောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သတင်းထောက်အလုပ်ကရပ်နားပြီး အလွတ်တန်းအနေနဲ့ သတင်းထုတ်လုပ်မှုတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းထောက်မသူဇာနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာ ရှေ့နေ့တွေက နယ်မြေရဲစခန်း၊ ခရိုင်ရဲစခန်း စစ်ကြောရေးစခန်းတွေကိုစုံစမ်းနေပေမဲ့ တိကျရေရာတဲ့သတင်းတော့ အခုထိမရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
"သြဂုတ်လနောက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပုံစံပြောင်းလာတယ်။ အထူးတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ၊တပ်ရင်း၊စစ်တပ်က သီးခြားဖမ်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲ့လိုဖမ်းသွားရင် နယ်မြေခံရဲစခန်းကမသိဘူး။ ခရိုင်ကိုမေးလည်းမသိဘူး။အခုနောက်ဆုံး မသူဇာကို အောင်သပြေစစ်ကြောရေးမှာ ရောက်နေတယ်၊ တချို့စစ်ကြောရေးတွေကလနဲ့ချီကြာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းသဲ့သဲ့ကလွဲရင် တိကျ ရေရာတာမသိရသေးဘူးလို့" မသူဇာရဲ့အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေအကြံပေးကပြောပါတယ်။
သတင်းထောက်မသူဇာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲ သယန်းကျွန်းပိုစ့်ဆိုတဲ့ သတင်းစာမျက်နှာကိုတည်ထောင်သူ မထက်ထက်နဲ့ကိုဝေလင်းယုကိုလည်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေက စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့ မှာနေအိမ်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မထက်ထက်ကို ပုစွန်တောင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံရာမှာတော့ အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ရုပ်ဝထ္ထုများပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပြီး ဒီပုဒ်မတွေအပြင် လှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့ လှိုင်သာယာရဲစခန်းတို့ကလည်းထပ်တိုးပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ တရားဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်။
ဒီလို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုမှုတွေအပြင် မနေ့က စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့မှာလည်း မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် ချယ်နယ်မန္တလေးသတင်းဌာန သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဝင်းနိုင်ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅ -က နဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာလည်း မဇ္စိုမသတင်းဌာနမှာ အယ်ဒီတာလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီးသတင်းထောက်အလုပ်ကရပ်ဆိုင်းကာ ဇာတိကို ပြန်လည်နေထိုင်တဲ့ သတင်းသမားတစ်ဦးကိုလည်း သူဇာတိနယ်မြေမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေအရ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ပြန်လည်ပစ်မှတ်ထား ဖမ်းဆီးတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေပြန်လုပ်လာနေတာဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ပါ တရားစွဲဆိုလာတဲ့ အခြေအနေဟာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေ့သုံးသပ်ပါတယ်။
" မီဒီယာသမားတွေ၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကို ပြန်လည်ဖမ်းဆီးတာတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာတယ်။ အာရုံထားလာတဲ့အပြင် အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအရ စွဲဆိုတဲ့ပုဒ်မတွေလည်း ပြင်းထန်လာတာဟာ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အမှုတွေအရ ပြင်းထန်တဲ့ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုတာတွေရှိတဲ့အပြင် မြို့နယ်အလိုက်ထပ်တိုးပုဒ်မတွေပါအက်ရှင်ယူပြီးတရားစွဲဆိုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်" လို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက် ဥပဒေရေးရာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေအကြံပေးတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီကသတင်းသမားတွေကို ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် သတင်းဌာန ၈ခုကိုလည်းထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဘက်က သတင်းမီဒီယာတွေကို စတုတ္တမဏ္ဍိုင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥပဒေနဲ့ အညီ လုပ်မယ်လို့ ပြောထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် ပိတ်သိမ်းခံသတင်းသမားတွေဟာ ပြည်ပအခြေစိုက်အဖြစ် ပြောင်းရွေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေမှာပဲ စစ်ကောင်စီဘက်က ပြည်တွင်းမှာကျန်ရှိနေတဲ့ မီဒီယာသမားတွေ၊ သတင်းထောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖူးသူတွေကို ပစ်မှတ်ထား ဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်လာတာလို့ သတင်းစာဆရာတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။
" နိုင်ငံပြင်ပရောက်သွားတဲ့ သတင်းဌာနတွေအတွက်ကို ဒီထဲမှာရှိနေသူတွေက သတင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သံသယတွေအရ လုပ်နေတာ၊ နယ်မြို့တွေမှာဆို ပိုပြီးပစ်မှတ်ထားခံရတယ်။ ဥပမာ နယ်မှာဆို သတင်းထောက်ကတစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ပြည်ပသတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေဖော်ပြရင် အဲ့ဒီမြို့က သတင်းထောက်ဟောင်းတွေ ပို့တယ်ဆိုတဲ့ သံသယရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ သတင်းဆိုတာ အပြင်ကလှမ်းမေးလည်းရတယ်၊ ဖုန်းဆက်လည်းရတယ်၊ ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေါ်ပိုစ့်တင်တာ တစ်ဆင့်လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလိုသတင်းတွေ မတက်အောင်လုပ်နေတာပါ။ ဒီအချိန်ကာလမှာ သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းရုံနဲ့ သတင်းတွေကရပ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး" လို့ သတင်းစာဆရာတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အခုလို သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ပစ်မှတ်ထား ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲ တစ်ဖက်ကလည်း အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ ပြင်ပမှာရှောင်တိမ်းနေထိုင်လို့
မရအောင် တင်းကျပ်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေလည်းရှိနေတာကြောင့် စိုးရိမ်ဖွယ် အနေအထားဖြစ်တယ်လို ဆက်ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သတင်းသမား ၁၀၀နီးပါးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး သတင်းသမား ၈ဦးကိုတော့ထောင်ဒဏ်ချက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းသမားကတော့ ၅၆ ယောက်ရှိပြီးသတင်းသမား ၄၆ ယောက်ကတော့ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ဆက်လက်ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးမှုပိုများလာပြီး စွဲဆိုတဲ့ ပုဒ်မတွေပြင်းထန်လာတယ်လို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြော